मिडिया एनपी, Author at Medianp.com - Page 15 of 81
यो हो सबैभन्दा लामो अंग्रेजी शब्द ! जसलाई पढ्न साढे ३ घण्टा लाग्छ ,कति शब्द ?
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: , ०, ०१२:०२0
काठमाडौँ । के तपाई एउटा शब्द पढ्नको लागी ३ घण्टा लाग्छ भन्दा पत्याउनुहुन्छ ?आज हामी त्यस्तै एक सबैभन्दा लामो शब्दको बारेमा कुरा गदै छौँ । जुन शब्दलाई देखेर तपाई विश्वास नै गर्नुहुन्न् । तर मानिसहरुलाई
कानुनी झमेलामा फस्यो सञ्जय दत्तको केजिएफ २ ,रोकियो फिल्मको शूटिङ
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: , ०, ०१०:५८0
काठमाडौँ। २०१८ मा रिलिज भएको साउथको सुपरस्टार यस अभिनित फिल्म केजिएफ को पहिलो भागले बक्स अफिसमा धमाका मच्चाएको थियो । फिल्मले बक्स अफिसमा किर्तिमान नै कायम गरेको थियो । यो फिल्मको अन्य भर्जनभन्दा हिन्दी भर्जनले
जय किशन बस्नेतको फिल्म हिरो नं १ को ट्रेलर सार्वजनिक (भिडियो)
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: , ०, ०१०:०८0
काठमाडौँ । जय किशन बस्नेतको फिल्म हिरो नं १ को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक ट्रेलरमा फिल्मका मुख्य कलाकार जय किसन बस्नेत, एलिना रायमाझी ,जाहन्वी बस्नेत, संघरत्न महर्जन, टार्जन, शोभित बस्नेत लगायतका कलाकारलाई देख्न
सलमान खानले फिल्म “इंशाअल्लाह” छोडेपछि संजय लिला भंसालीको पहिलो रोजाई शाहरुख
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: , ०, ००९:१९0
काठमाडौँ । संजय लिला भंसालीको फिल्म “इंशाअल्लाह” लाई सलमान खानले छोडेका छन् । सलमान खानले फिल्मको सबै काम अन्तिम चरणमा पुगेपछि फिल्मलाई छोडेका हुन् । अहिलेसम्म उनले फिल्म छाड्नुको कारण आन्तिरिक मनमुटाव भएको बताइन्छ ।
सोनम कपुर र दुलकर सलमान अभिनित फिल्म ‘द जोया फ्याक्टर’ काे ट्रेलर सार्वजनिक (भिडियो)
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: , ०, ००८:१८0
काठमाडौँ । सोनम कपुर र दुलकर सलमान अभिनित फिल्म ‘द जोया फ्याक्टर’ ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । यसअघि नै फिल्मको पोस्टर सार्वजनिक भएसँगै फिल्मको निकै चर्चा भएको थियो । हाल ट्रेलरले फिल्मलाई झनै चर्चामा पुयाउने
आज कुशेऔँसी : घरमा कुश राख्नुको यस्तो छ धार्मिक तथा वैज्ञानिक महत्व
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: , ०, ००७:४५0
काठमाडौँ । आज कुशेऔसी तथा बुबाको मुख हेर्ने दिन हो । प्रत्येक वर्षको भाद्र कृष्ण औसीको दिन आफ्नो जन्मदिने बाबुलाई मिठो खानेकुरा खुवाएर सम्मान गर्दछन् । बाबु नहुनेले नजिकको तीर्थ स्थलमा गएर श्राद्ध, तर्पण र
साउथ सुपरस्टार अजितको फिल्ममा अजय देवगन निभाउदै भिलेनको रोल ?
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: , ०, ००६:४५0
काठमाडौँ । गएको ८ अगस्टमा साउथ सुपरस्टार अजितको फिल्म नेरकोंडा पारवई रिलिज भएको थियो । फिल्मले राम्रो प्रतिक्रियाका साथै बक्स अफिसमा राम्रो कमाई पनि गरेको थियो । यस फिल्मको बोनी कपुरले पोड्यूस गरेका थिए ।वास्तवमा
पुष्प र साम्राज्ञी अभिनित फिल्म ‘मारुनी’आजबाट हलमा
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: , ०, ००६:०३0
काठमाडौँ । नायक पुष्प श्रेष्ठ र नायिका साम्रज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह अभिनित चलचित्र ‘मारुनी’ आजबाट देशभर प्रर्दशनमा आएको छ । चलचित्रको यसअघि सार्वजनिक भएको २ वटा गीतले निकै चर्चा पाएको थियो । पूनम गौतमले निर्माण गरेको चलचित्रलाई
चलचित्र ‘छ माया छपक्कै’को पहिलो गीत ‘जुनको जुनेली’ सार्वजनिक (भिडियो)
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: , ०, ००५:१२0
काठमाडौँ । चलचित्र ‘छ माया छपक्कै’को पहिलो गीत ‘जुनको जुनेली’ सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक गीतमा चलचित्रका मुख्य कलाकारहरु दीपकराज गिरी, केदार घिमिरे, जितु नेपाल, केकी अधिकारी, बुद्धि तामांङ र सुपुष्ना भट्टलाई देख्न सकिन्छ ।
यन्तो बन्यो झमक घिमिरेको जीवनीमा आधारित फिल्म ‘जीवन काँडा कि फूल’को ट्रेलर (भिडियो)
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: , ०, ०१२:०७0
काठमाडौँ । मदन पुरस्कार विजेता साहित्यकार झमक घिमिरेको जीवनीमा आधारित फिल्म ‘जीवन काँडा कि फूल’ को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । उनको ‘जीवन काँडा कि फूल’ कृतिमाथी रहेर निर्माण गरिएको फिल्ममा झमकको जीवनको सर्घषलाई प्रष्ट
Previous 1 … 14 15 16 … 81 Next